XOG+DAAWO:Mukhtaar Roobow oo noqon doona mid kamid ah madaxweynayaasha Soomaalida & Dowladd caan ah oo wadata + Waa Tuma Dowladdaasi???? – Puntlandtimes
XOG+DAAWO:Mukhtaar Roobow oo noqon doona mid kamid ah madaxweynayaasha Soomaalida & Dowladd caan ah oo wadata + Waa Tuma Dowladdaasi????
June 29, 2018 Puntland PL
MUQDISHO(P-TIMES)- Xoggo hoose oo ay ka heshay Puntlandtimes.com xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in wadaadka gooni u socodka ah ee Mukhtaar Roobow Abu Mansuur loo diyaarinayo xilka madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya oo doorashadiisa madaxtinimo ay dhici doonto Bisha November ee soo socota.
Abu Mansuur ayaa sida la sheegay waxa uu haatan xidhiidh wanaagsan la yeeshay dowladda Maraykanka kadib markii laga saaray liiska Argagixisada caalamiga ah, waxaana mudooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa dalka Jabuuti xubno ka socda dhanka wadaadkani, kuwaas oo kulamo hoose la qaatay saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda Maraykanka oo ay kala hadleen sidii looga garabsiin lahaa dagaalka Abu Mansuur uu kula jiro xoogaga Al-shabaab iyo sidoo kale in xidhiidh wanaagsan ay wada yeeshaan labada dhinac. RIIX HALKAN OO DAAWO BALANQAADKII ABU MANSUUR
Abuu Mansuur oo kamid ahaa aas aasayaasha Al-shabaab ayaa sanadkii hore sheegay inuu isaga baxay guud ahaanba ururka Al-shabaab, iyadoona malayshiyo taageersan wadaadkani oo ku sugan gobolka Bakool ay dhowr jeer dagaalo dhex mareen xoogag taabacsan Al-shabaab, waxaana haatan Abu Mansuur loo soo jeediyey in uu kamid noqdo musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dowladda Maraykanka ayaa xiligani iyadu u muuqata mid garab weyn siinaysa wadaadkani, waxaana marar badan dhacday in ay wada hadalo gaar gaar ah ay dhex maraan masuuliyiin ka socday dowladda Maraykanka iyo Abuu Mansuur, taas oo ugu dambeyntii sababtay in afar xubnood oo ka socday dhanka Abuu Mansuur ay kula kulmaan dalka Jabuuti saraakiil ka tirsan taliska Maraykanka ee Africom kaas oo fadhigiisu uu yahay dalka Jabuuti.
Bisha November ee soo socota ayaa waxaa la filayaa in ay ka qaybsoonto gudaha magaalada Baydhabo ee caasimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashadii madaxtinimo ee ugu horaysay ee maamulka Koonfur Galbeed, taas oo ay ku loolami doonaan musharixiin badan oo ay kala wataan dowladdo iyo shakhsiyaad gaar ah.